Filtrer les éléments par date : samedi, 28 décembre 2019
samedi, 28 décembre 2019 11:09
Hiaraha-hiasa amin’ny JIRAMA ny orinasa Egyptiana Elsewedy Electric, amin’ny famatsiana kaontera "intelligent", mandeha amin'ny alalan'ny fahana. Natao ny 24 desambra lasa teo ny fifanaovan-tsonia mikasika izany, izay miompana amin’ny fananganana orinasa mpamokatra io kaontera io eto Madagasikara, izay hiarahan’ny roa tonta mitantana (joint venture).
Vinavinaina hatomboka ny volana may 2020 ny fananganana ity orinasa ity. Ny orinasa Elsewedy Electric no hamatsy kaontera mandra-pijoron’ilay orinasa.
Tombanana hahazo tombony 20% ny JIRAMA amin’ity fiaraha-miasa ity, izay hampihena ny fatiantoka eo amin’ny lafiny varotra.
Ho foana ny hosoka sy ny halatra herinaratra amin’ny fampiasana ny kaontera “intelligent”. Tsy hisy intsony ny fanaterana faktiora isan-tokantrano. Ny kaontera no mamoaka ny herinaratra lanin’ny mpanjifa, ary tapaka avy hatrany ny herinaratra rehefa tsy misy fahana ny kaontera.
samedi, 28 décembre 2019 10:45
Fiainana antoko: Tsaroana manokana nandritra ny fankalazana ny faha 47 taonan'ny MFM i Manandafy Rakotonirina
Teraka ny 30 oktobra 1938 i Manandafy Rakotonirina tao Fandriana, Faritany Fianarantsoa.
Nianatra tao amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa tao Ambositra sy Antsirabe i Manandafy.
Nanohy fianarana tao amin'ny oniversite an'Antananarivo izy, Facultés de droit et des lettres.
Niditra teo amin'ny sehatra politika izy, ka anisan'ireo ati-doha niketrika tao anatin'ny antoko MONIMA notarihan'i Dada Monja, na i Monja Jaona. Nirona tany amin'ny tolona ho an'ny sahirana sy ny madinika izy tamin'izany.
Nampianatra sociologie izy, ary dia navaivay tokoa ireo asa soratra fanakianana ny mpitondra tamin'izany, ary anisan'ny ati-doha niketrika ny ady amin'ny fanagejana nataon'ny mpitondra.
Voasambotra izy ny volana avrily 1971 amin'ny maha mpikambana ny antoko Monima azy.